News | Coutinho
News | Tag: Coutinho
बार्सिलोनाले कोटिन्हो बेच्न खाेज्नुकाे मुख्य कारण यस्तो
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिप कोउटिन्होलाई बेच्ने तयारी गरेको छ । जारी सिजनमा कोउटिन्होको प्रदर्शनले क्लबलाई निराश बनाएपछि उनलाई क्लबले बेच्ने तयारी गरेको हो । बार्सा समर्थकहरुले पनि उनलाई नरुचाएको बताइरहेको छ ।
कोटिन्हो बेच्ला त बार्सिलोनाले ?
निराशाजनक प्रदर्शनपछि कोउटिन्होलाई बेच्ने तयारीमा बार्सिलोना
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिप कोउटिन्होलाई बेच्ने तयारी गरेको छ । जारी सिजनमा कोउटिन्होको प्रदर्शनले क्लबलाई निराश बनाएपछि उनलाई क्लबले बेच्ने तयारी गरेको हो । आइतबार राति घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा गेटाफेसँग भएको खेलमा कोउटिन्होको खुट्टामा बल पर्ने बित्तिकै बार्सा समर्थकहरुले सिट्टी बजाउँदै उनलाई नरुचाएको बताइरहेका थिए ।
बार्सिलोना पुगेका कोटिन्होको करिअर यता न उता !
एजेन्सी । बार्सिलोनाले ठुलो धनराशि खर्चिएर अनुबन्ध गरेका खेलाडी फिलिपि कोटिन्होको भविष्य संकटमा परेको छ । बार्सिलोनाले चाहेजस्तो खेल खेल्न नसकेपछि उनको करिअर एता न उताको भएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
कोउटिन्होलाई पीएसजीको २७० मिलियन युरोको प्रस्ताव
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले ब्राजिलियन खेलाडीको लागि २७० मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।